Abaal Marinta Ballon D'Or Oo Caawa La Bixinayo, Kaalmaha Oo Maanta La Shaacin Doono Iyo Boggaga Hore Ee Wargaysyada Spain Oo Si Wayn Loogaga Hadlay. - Gool24.Net
Abaal Marinta Ballon D’Or Oo Caawa La Bixinayo, Kaalmaha Oo Maanta La Shaacin Doono Iyo Boggaga Hore Ee Wargaysyada Spain Oo Si Wayn Loogaga Hadlay.
Abaal marinta Ballon d’Or ee xidiga aduunka ugu fiican ayaa caawa la bixin doonaa iyada oo majalada France Football maanta shaacin doonta kaalmaha ay kala galeen 30 kii musharax ee ku tartamayay abaal marintan. Laakiin wargaysyada Spain ayaa boggagooda hore saaka ku soo daabacay xog la xidhiidha abaal marintan.
Waxaa la aaminsan yahay in markii ugu horaysay tobankii sanadood ee ugu danbeeyay uu abaal marinta Ballon d’Or ku guulaysan doono ciyaartoy aan ahayn Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo min jeer ku soo guulaysatay abaal marintan.
Luka Modric oo sanadkan ku soo wada guulaystay abaal marinihii UEFA iyo FIFA ee xidiga Yurub iyo aduunka ugu fiican ayaa markale loo arkaa in uu xidigihii koobka aduunka ugu soo guulaystay France uu abaal marinta Ballon d’or ka hor qaadi doono inkasta oo haddaba ay dood badani taagan tahay.
Haddaba waxaanu halan idiinku soo gudbinaynaa waxyaabihii ay wargaysyada ciyaaraha dalka Spain saaka ugu soo daabaceen boggaga hore ee wargaysyadooda iyada oo abaal marinta Ballon d’Or ay qaybta ugu wayn ka tahay.
Halkan kaga bogo Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee saaka oo Isniin Ah Lagu Soo Daabacay Boggaga Hore Ee Wargaysada Dalka Spain.
Bogga Hore Ee Wargayska Marca:
Sawirka bogga hore ee wargayska Marca waxaa saaka loo doortay min shan sawir oo ay leeyihiin Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo ay sare u ahayaan abaal marinta Ballon D’or waxaana qoraalka ciwaanka lagu yidhi: “…..Iyo Modric oo Ballon d’Or Iyaga ka qaaday”.
Waxaana qoraalka la sii raaciyay: “Modric waxa uu caawa abaal marinta ku gudoomi doonaa Paris waana dhamaadka toban sano oo ay soo maamulayeen Messi iyo Roanldo”.
Qaynta kale ee wargayska marca waxaa looga hadlay isku aadkii isreeb reebka Euro 2020 ee xulka Spain waxaana qoraalka lagu yidhi: “Sweden iyo Norway ayaa ah kooxaha ugu muhiimsan”.
Intaa kadib natiijooyinki kulamadii xalay ee La Liga ayaa looga sii hadlay bogga hore ee wargayka Marca waxaana lagu yidhi: “Atleti waxay ku soo laabtay barbarihii martida. Pique waxa uu Barca dib ugu soo celiyay halka guu saraysa”.
Bogga Hore Ee Wargayska Mundo Deportivo:
Bogga hore ee wargayska Mundo Deportivo waxaa saaka loo hibeeyay sawirka dabaal dega ciyaartoydii Barcelona ee kulankii Villarreal waxaana ciwaan loo dhigay: “Ku soo laabashada hogaaminta”. oo ah in Barca ay hogaanka La Liga ku soo laabtay.
Waxaana qoraalka la sii raaciyay: “Barca waxay ku soo laabtay halka ugu saraysa kadib in ay garaacday Villarreal iyo barbarihii Sevilla ee Alaves. Goolal fiican oo ay dhaliyeen Pique iyo Alena iyo Dembele oo fantastik ah”.
Qaynta kale waxaa looga hadlay isku aadkii isreeb reebka Euro 2020 ee xulka qaranka Spain waxaana qoraalka lagu yidhi Groupyada Euro 2020: Spain, Sweden, Norway, Romania, Faroe Islands, Malta”.
Bogga Hore Ee Wargayska AS:
Bogga hore ee saaka ee wargayska AS waxyaabo badan oo kala duwan ayaa looga hadlay waxaana ka mid ah Ballon d’or waxaana qoraalka lagu yidhi: “Ballon d’or waxay maanta abaal marinaysaa kuwa ugu fiican 2018. Modric iyo Griezmann ayaa soo gaba gabaynaya kootadii Ronaldo/Messi”.
Sidoo kale natiijooyinkii kulamadii La Liga ayaa looga hadlay: “Atleti hal dhibic ayay badbaadsatay kulankii fiicnaa ee Girona. Cajiibnimada Dembele iyo Barca oo ah hogaamiyaaha cusub. Goolkii Ben Yedder kumuu filnaan Sevilla”.
Kadib isku aadkii Euro 2020 ayaa looga hadlay: “Kooxaha Spain la xifiltami doonto -Sweden, Norway, Romania, Faroe Islands, Malta”.
Ugu danbayn wargayska AS ayaa soo qaatay arinla xidhiidha Isco taas oo uu barta Instagram ku waydiiyay in uu cayilan yahay ama buuran yahay: “Isco waxa uu Instagram waydiiyay haddii uu buuran yahay/cayilan yahay ama aanu buurnayn”.
Si kastaba ha ahaatee, maanta waxaa la shaacin doonaa kala saraynta kaalmihii ay galeen 30 kii musharax ee abaal marinta Ballon d’Or iyada oo caawa la bixin doono abaal marintan laakiin haddaba qaynta liiskan lagu dhawaaqo ayaanu isha Allah idiin soo gudbi doonaa.